COVID-19 Macluumaadka iyo Cusbooneysiinta - Dugsiyada Robbinsdale Area
Boggan si joogto ah ayaa loo cusbooneysiiyaa markii macluumaad cusub la helayo. Waxaan la wadaagi doonnaa macluumaadka deegaanka, gobolka iyo qaranka sida ay ula xiriirto beesheena.
Khadadka Khadka Tooska ah ee Minnesota
Haddii aad qabtid su'aalo dheeraad ah oo ku saabsan COVID-19 ee Minnesota, la xiriir khadka taleefanka ee Waaxda Caafimaadka ee Minnesota (MDH) 651-201-3920 ama 1-800-657-3903, 7 subaxnimo ilaa 7 fiidnimo
Waaxda Waxbarashada ee Minnesota iyo khadka adeegga bulshada ee Waaxda Adeegyada Aadanaha ayaa awood u leh inay wax ka qabtaan su'aalaha yareynta bulshada ee la xiriira iskuulka, daryeelka carruurta ama dhibaatooyinka ganacsiga. Wac 651-297-1304 ama 1-800-657-3504, 7 subaxnimo ilaa 7 fiidnimo
Si aad u hesho goob lagu tijaabiyo bulshada, fadlan booqo bogga internetka ee Jawaabta ee Minnesota COVID-19.
Bogga Hennepin County ayaa sidoo kale liis garaya ilaha baaritaanka COVID-19 oo ay weheliyaan dhacdooyinka imtixaanka soo socda.
Tilmaamaha CDC COVID-19 ee Caafimaadka Lagu Noolaado
Ogow sida uu u faafo
Ma jiro xilligan tallaal looga hortago coronavirus (COVID-19). Sida ugu fiican ee looga hortagi karo jirro waa in laga fogaado la-qaadashada fayraskan. Feyraska waxaa loo maleynayaa inuu ku faafo inta badan qof-ilaa-qof. Dhibco ayaa la soo saaraa marka qof cudurka qaba qufaco, hindhiso ama hadlo. Daraasadihii ugu dambeeyay qaarkood waxay soo jeediyeen in COVID-19 ay faafin karaan dadka aan calaamadaha muujin.
Nadiifi gacmahaaga badanaa
Ku dhaq gacmahaaga inta badan saabuun iyo biyo ugu yaraan 20 ilbidhiqsi gaar ahaan ka dib markaad joogto meel fagaare ah, ama ka dib markaad sanka ka dhufato, qufacdo ama hindhisooto. Haddii saabuun iyo biyo aan si fudud loo heli karin, isticmaal gacmo nadiifiye oo ay ku jiraan ugu yaraan 60% aalkolo. Ka fogow taabashada indhahaaga, sankaaga, iyo afkaaga gacmo aan la maydhin.
Ka fogow xiriir dhow
Yaree la xiriirka dadka kale sida ugu macquulsan. Ka fogow xiriir dhow oo aad la leedahay dadka jiran. Dhex dhig naftaada iyo dadka kale. Tani waxay si gaar ah muhiim ugu tahay dadka halista ugu jira inay aad u bukoodaan.
Xidho maro wejiga daboolaya
Qof kastaa waa inuu xirtaa maro wajiga ka daboolan oo la dhigaa goobaha dadweynaha iyo marka la joogo dadka aan la deganayn gurigooda, gaar ahaan marka kala fogeynta bulshada ay adag tahay in la ilaaliyo. Daboolka wejiga marada ayaa loogu talagalay in lagu ilaaliyo dadka kale haddii aad qaadsiiso. Sii wad inaad ilaaliso ilaa lix fuudh adiga iyo dadka kale haddii aad qaadsiiso cudurka.
Had iyo jeer ku dabool afkaaga iyo sankaaga maro markaad qufacayso ama hindhisayso ama aad isticmaaleyso xusulka gudihiisa. Ku tuur unugyada la isticmaalay qashinka. Isla markiiba gacmahaaga ku dhaq saabuun iyo biyo ugu yaraan 20 ilbidhiqsi. Haddii saabuun iyo biyo aan si fudud loo heli karin, ku nadiifi gacmahaaga nadiifiye gacmeed oo ay ku jiraan ugu yaraan 60% aalkolo.
Nadiifi oo jeermiga dil
Nadiifi oo jeermiska ka nadiifi sagxadaha taabashada maalin kasta. Tan waxaa ka mid ah miisaska, albaabbada albaabbada, shidmooyinka nalka, miisaska miiska, gacmaha, miisaska, taleefannada, teebabka, musqulaha, qasabadaha iyo saxanka. Haddii sagxaduhu wasakh yihiin, nadiifi; kadib isticmaal jeermiska guryaha lagu dilo.
Macluumaadka iyo sawirrada laga helo Xarumaha Xakamaynta & Kahortagga Cudurrada. PDF macluumaadka .